﻿ कोरोनाले महिलामा परेको प्रभाब
- अनु तिम्सिना
२०१९ को अन्त्यतिर देखि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वका विभिन्न देश हुँदै अहिले नेपालमा पनि माहामारिको रुपमा फैलिएको छ । दिन प्रतिदिन यसले नेपालीको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भैरहेको छ । अरु क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि कोरोनाले नराम्ररी असर पारेको छ ।
विश्व महामारीको अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्थामा सबैको ध्यान कसरी महामारीबाट बच्ने र बचाउने भनेर केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । महामारीको अवस्थामा घरभित्र बस्नुको विकल्प पनि छैन । सबैले ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रमा असर पुगेको कारण अन्य क्षेत्र बर्ग जस्तै यसले महिला पनि नराम्ररी असर पुर्याएको छ । जसका कारण अहिले प्रायः सबै महिलाको दिनचर्यामा परिवर्तन आएको छ । सम्पूर्ण स्कुल, कलेज, अफिस, कलकारखाना अनि व्यापार ब्याबसाय बन्द छन् । बन्द भएका कारणले गर्दा भएजति परिवारका सदस्य सबै घरमा छन् । बिहान बेलुका दिउँसो देखि लिएर घरको भान्छाको जिम्मा प्राय महिलाको काँधमा आउँछ ।
हुनेखाने परिवारका महिलाले त ३÷४ बोरा चामल अनि घरको भान्छामा आवस्यक पर्ने सामानको व्यवस्था गरे होलान् तर निम्न बर्गाका दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखाने बर्गका परिवारका ती महिलाको कुन हालत भएको होला ? त्यसतर्फ कसैले सोचेको होला त ? दैनिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वउद्यम गर्नेहरुको रोजगारी बन्द भएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरुको चुलोमा देखिएको छ । त्यही कारण त्यसको प्रतक्ष्य तनाव महिलाले बढी खेपेका छन् । त्यस्तै हुनेखाने बर्गका परिवारमा पनि महिलालाई पहिलाको भन्दा भान्छाको कामको चाप बढेको महसुस गरेका छन् ।
कुनै ब्यपार ब्यबसाय संचालन गरेर बसेका महिला पनि यो समयमा घरमा नै थुनिएका छन् ।आफ्नु ब्यबसायमा भएको घाटा साथै परिवारिक आम्दानिको स्रोतमा समेत असर परेको कारण उनीहरु थप चिन्तित बनी रहेका छन् । कति पय क्षेत्रमा त एहि महामारिकै समयमा नै घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढेका छन् । कतिपय अवस्थामा घरभित्रै हिंसा भएका महिलाहरु सहयोग, सहायता नभएका कारणले उजुरी गर्न नसक्दा थप पिडित हुन बाध्य छन् ।
यौन हिंसा, बलात्कार, बलात्कार पछि हत्या र आत्महत्याका घटनाहरु पनि बढेका छन् । यी सबैको कारण कोरोनामहामारी, लकडाउन, यसले निम्त्याएको मानसिक तनाब, आर्थिक चुनौती, र निरन्तर चलिआएका गतिबिधिमा रोक लाग्नु हो । महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका हुँदा महिलाका समस्या ओझेलमा परेका छन् । साथै सामाजिक रुढीबादी सोचका कारणले गर्दा पनि कतिपय महिलाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
ज्यालादारी, मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने निम्न तथा अतिनिम्न आय भएका महिला यस महामारीको सबै भन्दा धरै चपेटामा परेका छन् । एक त रोजगारी गुमेको छ, अर्कोतिर आर्थिक संकट र त्यसमाथि कोरोना संक्रमणको डर, यीसबैले महिलाहरुका समस्या झन चुलिन थालेको भान हुन्छ ।
महिला भएकै कारण महिलामा हुने हिंसा र त्यसलाई प्रोत्साहन नदिन, कोरोना महामारी बिरुद्ध लड्न सबैजना आफ्नो आफ्नो स्थानबाट एकजुट हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।